» यी हुन् ब्याटलका लागि छानिएका उत्कृष्ट ६४ प्रतियोगीहरु (भिडियो)
यी हुन् ब्याटलका लागि छानिएका उत्कृष्ट ६४ प्रतियोगीहरु (भिडियो)
१३ आश्विन २०७६, सोमबार ११:४२
चन्द्र घलान, १३ असोज । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो ‘द भ्वाईस अफ नेपाल’ को सिजन २ मा सबै ब्लाईन्ड अडिसनहरु सकिएका छन् । अहिले ब्याटल राउण्ड सुरु भएको छ । ब्लाईन्ड अडिसनबाट चारै जना कोचले १६–१६ जनाको ड्रिम टिम तयार पारेका छन् । ब्लाईन्ड अडिसनबाट ६४ जना सहभागीहरुले ब्याटलका लागि आफुलाई योग्य ठहराएका छन् । जसमध्ये २१ जना सहभागीहरुले चारै जना कोचलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल भएका छन् । त्यस्तै ब्लाईन्ड अडिसनमा सहभागी भएका १९ जनाको अगाडि बढ्ने सपना सकिएको छ । यस भिडियो सामाग्रीमा हामीले भ्वाईसको दोस्रो सिजनमा ब्याटलका लागि छनौट हुन सफल ६४ जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गरेका छौँ ।
आदरणीय दर्शकविन्द, तपाईको विचारमा यी ६४ जना प्रतियोगीहरुमध्ये कसले बाजी मार्छ जस्तो लाग्छ ? को पुग्लान् फाईनलसम्म ? अनि को बन्नेछ भ्वाईस अफ नेपाल सिजन २ को विजेता ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै अन्य भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्क्राईब गर्नुहोला । हेर्नुहोस् भिडियो–